လမ်းညွှန်ပေးခြင်း - Myanmar Network
Posted by Language Republic on June 14, 2012 at 14:03 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ "Giving Directions - လမ်းညွှန်ပေးခြင်း" ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဧည့်သည်ဖြစ်တဲ့ June (A) ကို Rosa (B) က သူတို့ရုံးကိုဘယ်လိုလာရမယ်ဆိုတာပြောပြတဲ့ စကားအချီအချပြောဟန် ကိုလေ့လာကြည့်ပါ။
A. Hi, Rosa. It’s June here. I’m in the town centre outside the bus station. Could you tell me how to get to your office from here? (ဟိုင်း ရိုစာ။ ဂျွန်ပါ။ ငါ ကားဂိတ်ရဲ့အပြင်ဘက် မြို့လယ်ခေါင်မှာ ရောက်နေတယ်။ဒီကနေ ရှင့်ရုံးကို ဘယ်လိုလာရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးနိုင်မလား?)
လမ်းမေးရာတွင် အောက်ပါအသုံးအနှုန်းများကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Can you tell me the way to …? (…………. ကိုသွားတဲ့လမ်းကို ပြောပြနိုင်မလား?)
How do I get to…? (… ကို ဘယ်လိုသွားရမလဲ?)
Excuse me, where is the main office? (တစ်ဆိတ်လောက်ခင်ဗျာ။ ရုံးချုပ်က ဘယ်နားမှာလဲ?)}
B. Sure. Follow the signs for Frankfurt. After about two kilometres, you’ll seeagarage on your right. Carry on for another 200 metres and then turn left. Our office is on the left-hand side, just beforearailway bridge. When you arrive, park in one of the visitors’ spaces just outside the main building. (ရပါတယ်။ ဖရင့်ဖွတ် ကို ညွှန်တဲ့ လမ်းပြဆိုင်းဘုတ်တွေအတိုင်းလိုက်လာခဲ့ပါ။ ၂ ကီလိုမီတာလောက် သွားပြီးရင် မင်းရဲ့ညာဘက်မှာ ကားဂိုဒေါင်တစ်ခုတွေ့လိမ့်မယ်။ နောက်ထပ် မီတာ ၂၀၀ လောက် ဆက်သွားပြီးရင် ဘယ်ဘက်ကို ကွေ့လိုက်။ ငါတို့ရုံးက ဘယ်ဘက်အခြမ်းမှာ ရှိတယ်။ မီးရထားဂုံးကျော်တံတားနားမရောက် ခင်လေးတင်။ မင်းရောက်လာရင်ပင်မအဆောက်အဦးရဲ့ အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ ဧည့်သည်များ ယာဉ်ရပ်နားရန် နေရာ တစ်နေရာမှာ ကားရပ်ခဲ့လိုက်။)
A. Thanks, Rosa. See you soon. (ကျေးဇူးပဲ ရိုစာရေ။ မကြာခင်တွေ့ကြတာပေါ့။)
အခြားသိသာထင်ရှားသည့် အမှတ်အသားများ အားဖော်ပြရာတွင်အသုံးပြုသောဝါကျအသုံးအနှုန်းများ
You’ll pass some shops. (ဆိုင်အချို့ကို ဖြတ်လာရလိမ့်မယ်။)
Then you’ll seealarge red building in front of you. (အဲ့ဒီနောက် မင်းရဲ့ရှေ့မှာ အနီရောင် အဆောက်အဦးတစ်ခုကို တွေ့လိမ့်မယ်။)
Keep going and you’ll come to the entrance gate. (ဆက်သွားလိုက်ပါ ပြီးရင် အ၀င်ဂိတ်ဝကို ရောက်လာ လိမ့်မယ်။)
ကားရပ်နားခြင်း­ ဆိုင်ရာ ဝါကျအသုံးအနှုန်းများ­
I’ve left my car inareserved space. (ကျွန်တော့်ကားကို သီးသန့်နေရာမှာ ထားခဲ့တယ်။)
There are some spaces reserved for visitors. (ဧည့်သည်တွေအတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေရာအချို့ရှိတယ်။)
Can I park here? (ဒီမှာ ကားရပ်လို့ရလား?)
Is this space reserved? (ဒီနေရာကို သီးသန့်ထားထားတာလား?) }
Permalink Reply by Zaw Win on June 15, 2012 at 12:11
Thanksalot of the post, giving direction.
Please post more and more.
Permalink Reply by win on June 15, 2012 at 13:59
Permalink Reply by Wai Phyo Oo on June 15, 2012 at 17:14
Thanks I Need To Learn And I'll Waiting For Other Post Like That
Permalink Reply by kawblut on June 15, 2012 at 18:09
Permalink Reply by mya than soe on June 16, 2012 at 7:59
Permalink Reply by pyaepyae on June 16, 2012 at 12:49
Permalink Reply by ibrahimyahkub on June 16, 2012 at 15:05
Permalink Reply by Thin Thin Yu on June 17, 2012 at 11:57
Permalink Reply by YIN YIN PYONE on June 18, 2012 at 12:38
Permalink Reply by Gyit on June 18, 2012 at 15:04
Thks for this lesson
Permalink Reply by Ratan Biswas on June 18, 2012 at 18:36
Permalink Reply by kyi san on June 18, 2012 at 21:05